तपाईको आज बिहीवारको राशिफल, हेर्नुहोस् आज क–कसलाई छ त विशेष शुभ ? « Sansar News
तपाईको आज बिहीवारको राशिफल, हेर्नुहोस् आज क–कसलाई छ त विशेष शुभ ?
२८ आश्विन २०७८, बिहीबार ०७:१५
द्विविधा बढ्नाले निर्णायक क्षमता कमजोर बन्नेछ। वादविवादले काममा बाधा पुर्याउनेछ, सजग रहनुहोला। अरूको वचन हार्न नसक्दा दुःख पाइनेछ। तर मिहिनेत गर्दा आयस्रोत बढ्नेछन् र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुनेछ। अध्ययनमा समय दिन नसकिए पनि नयाँ ज्ञान सिक्ने समय छ। व्यापारमा आम्दानी बढाउन सकिनेछ। प्रतिस्पर्धामा भने सावधान रहनुहोला।
नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू बढ्नेछन्। रचनात्मक काम बन्नुका साथै मनग्गे धन आर्जन हुनेछ। पहिलेको सफलताले थप हौसला जगाउनेछ। रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। तर बलजफ्ती गर्ने बानीले साथीभाइ टाढिन सक्छन्। स्वास्थ्यका लागि खानपानमा अलि सजग रहनुहोला। आफन्तको साथ सहयोग जुट्नेछ।
२०७८ असोज २८ गते, बिहीवार, (१४ अक्टोबर)
तपाईको आज बुधवारको राशिफल भन्छ–आज यी ६ राशिकालाई हुनेछ विशेष फाइदा !
तपाईको आज आइतवारको राशिफल, हेर्नुहोस् आज क–कसलाई छ…
तपाईको आज शनिवारको राशिफल भन्छ- आज यी पाँच…
तपाईको आज विहीवारको राशिफल भन्छ–आज यी ६ राशिकालाई…
तपाईको आज सोमबारको राशिफल भन्छ– आज यी ६…
तपाईको आज शनिवारको राशिफल भन्छ–आज यी पाँच राशिकाले…